Madaxweynaha Soomaaliya oo la kulmey raysalwasaaraha Turkiga • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Federal Republic of Somalia / Madaxweynaha Soomaaliya oo la kulmey raysalwasaaraha Turkiga
Madaxweynaha Soomaaliya oo la kulmey raysalwasaaraha Turkiga
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Xassan Shiikh Maxamuud oo maalmahan safar ku joogey dalka Turkiga ayaa kulan la qaatey raysalwasaaraha Turkiga Racep Tayyip Erdogan, kulanka labada masuul ayaa ka dhacay magaalada istanbul ee dalka Turkiga.
Madaxweynaha Soomaaliya oo u tegay Turkiga sidii Dawladda Soomaaliya looga caawin lahaa dib u dhiska hay’adaha dawliga ah iyo dib u dhiska ciidanka ayaa kulankii isaga iyo Erdogan dhexmaray diirada lagu saarey iskaashiga labada dal, dib u dhiska ciidanka iyo sii wadida mashaariicda horumarineed.
Safiirka Soomaaliya u fadhiya Turkiga ayaa warbaahinta u sheegay in labada dhinac ay qalinka ku duugeen heshiis iskaashi kaas oo dalka Turkigu ku sii ballaarianyo taageerada Soomaaliya.
Dawladda Soomaaliya oo hadda aan ahayn kumeelgaar ayaa geli karta heshisyo caalami ah. Wefdiga Madaxeeynaha waxaa kamid ah Wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya.
Raysalwasaaraha Turkiga ayaa indhaha caalamka ku soojeediyey Soomaaliya kadib markii uu booqdey Bishii Oktober 2011 xiligaas oo Koonfurta Soomaaliya ay ka taagneyd macaluul ba’an, xaaladda amniguna ay ka liidatey sida ay maanta tahay.